देउवाले छाने नयाँ गृहमन्त्री, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
देउवाले छाने नयाँ गृहमन्त्री, को हुन् उनि ?
काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भसकेको छ। सरकारमा रहेका चारवटै पार्टीले आफ्ना केहि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने भएका छन्।
माओवादी केन्द्रले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्‍वर जंग गहतराज अथक र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको छ। यता एकिकृत समाजवादीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायतलाइ फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो।
तेस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। जसपाले पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ।
उनीहरुले यस अघि नै मन्त्रीहरुलाई आधा कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको जनाएका थिए। काँग्रेसले पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने छ। निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनु अगावै मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरिसक्ने योजनामा सत्ता गठबन्धन रहेको श्रोतको दावि छ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका बारेमा गठबन्धनको उच्च तहमा छलफल भएको छ, केहि मन्त्रीहरु हेरफेर हुनेछन् भने केहि मन्त्रालय समेत साटफेर हुन सक्छन्’, बालु्वाटार श्रोतले भन्यो।
श्रोतका अनुसार माओवादीले अर्थमन्त्री शर्मालाई मन्त्रीबाट र्फिता गरेर पार्टी महासचिव बनाउन लागिएको माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले बताए। शर्माको ठाउँमा बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्डले गरेका छन्।
शर्माले पार्टी महासचिव नबनाए आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन पर्ने माग राखेका छन्। उहाँको जोड पार्टीको महासचिवमै छ। तर बार्गेनिङका लागि कांग्रेसले चलाइरहेको गृह मन्त्रालयमा आँखा लगाउनु भएको छ।
माओवादी केन्द्रका चर्चित नेताले भने, अर्थमन्त्रालयमा राम्रो गर्न सकिन भन्ने उहाँ आफैलाई लागेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेबारे शिर्ष तहमा छलफल भएको छ’ माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले भने।
त्यसो त केहि मन्त्रालयहरु समेत साटफेर हुने सम्भवना रहेको श्रोत बताउँछ। माओवादीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिएर काँग्रेसले अर्थमन्त्रालय लिने सम्भावना समेत छ । त्यस्तो अवस्थामा वर्षमान पुनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ।
डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रबाट सारेर अर्थ मन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ। त्यसो त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि अर्थमन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
उता, नेकपा एकिकृत समाजवादीले गतिलो मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार वा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग समाजवादीले अघि सारेको छ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेश माहाधिबेशनको गुण तिर्न प्रकाशमान सिहलाई गृहमन्त्रि नियुक्त गर्न लागेको नाम नबताउने सर्तमा एक नेताले जानकारी दिए। शक्ति सन्तुलन नमिल्ने भन्दै कांग्रेशका अरु नेताहरुले पनि गृहमन्त्रालय अरुलाई दिन नहुने बताइरहेका छन्।
प्रचण्डसंग बाग्रेनिङमा नारायणकाजि: नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डले पार्टीमा जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। यो विगतदेखि चल्दै आएको माओवादी संस्कार हो। प्रचण्डले चाहे कसैलाई टिका लगाएर ठुलो मान्छे बनाइदिन सक्छन्।
प्रचण्डले चाहे आफैँले आफैलाई टिका लगाएर बर्षौ नेतृत्वमा रहीरहन सक्छन्। त्यसलाई स्वीकार्नेहरु माओवादीमा रहन्छन्, नत्र चुपचाप आफ्नो बाटो तताउँछन्। यसरी विगतमा माओवादीमा धेरैले बाटो तताएका छन्। त्यो शिलशिला अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म आइपुगेको छ।
१० बर्षे जुनयुद्धपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेसँगै जस्केलाबाट छिरेका र सबैभन्दा बढी सुविधाभोग गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले प्रचण्डसँग अन्तरसंघर्ष चर्काइरहेका रहेका छन्।
२०६५ पछि माओवादीमा समाहित भएका उनी प्रचण्डसँग बाग्रेनिङ गर्ने र सत्ता र सुविधाभोगको मजा उठाउने पात्रका रुपमा माओवादीभित्रै आलोचित छन्। पछिल्लोपटकएमसीसीको मुद्धामा अध्यक्ष प्रचण्डसँग विमति राख्दै पार्टीभित्र श्रेष्ठको संघर्ष चर्किएको छ।
पार्टी विपक्षमा उभिएकै बेला प्रचण्डले एमसीसी पास गरेर गम्भीर भूल गरेको आरोपसहित उनी पार्टीबाटै विभाजित हुनेसम्मको छलफल चलाइरहेका छन्। तर यसलाई पार्टी पदाधिकारीका लागि गरिएको बाग्रेनिङका अर्थमा समेत बुझिएको छ।
पुस ११ देखि १८ सम्म आठौं महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले २ सय ४६ केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष मात्र चयन गर्यो। महासचिवसहितका महत्वपूर्ण पदाधिकारी चयन बाँकी नै छ। ठिक यसैबेला विमति जाहेर गर्दै गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिवका रुपमा सुनिश्चित गर्न नारायणकाजी समूह असन्तुष्ट बनेको आरोप प्रचण्डनिकट नेताहरुको छ।
जसले पदाधिकारी व्यवस्थापनमा चुनौति दिएपछि निर्वाचनपछिमात्रै यसलाई टुंगोमा पु¥याउने तयारीप्रचण्डले गरेका छन्। तर पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलिरहँदा श्रेष्ठले माओवादीबाट यसअघि नै अलग्गीएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग वार्ता थालेपछि प्रचण्ड दबाबमा परेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन एमसीसीविरुद्धको मोर्चामा उभिएका अन्य कम्युनिष्ट घटकले समेत नारायणकाजी समूहलाई उच्काएर पार्टी छोड्नका लागि बल पु¥याइरहेका छन्।
व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी अनुमोदनले ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र चिरेको प्रचण्डको तर्कसँगैपार्टी छाडेर जानेलाई बाटो खुला रहेको अभिव्यक्तिले नारायणकाजी समूहलाई चोट पु¥याएको हो ।प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कमजोरीका रुपमा स्वीकार्दै पार्टीबाट अलग नहुन आग्रह गरेका छन्।
एकपटक नारायणकाजी निवासमै पुगेर फकाउने कोशिस गरेका उनले अर्कोपटक आफ्नै निवास बोलाएर वार्ता गरेका थिए । तर पनि नारायणकाजी समूहले अब अन्तिमसम्म अन्तरसंघर्ष गर्ने कि फरक पार्टीको विकल्पमा जाने गृहकार्य चलाइरहेको छ।
त्यसको पहिलो कदम स्वरुप यो समूहले बिहिबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक प्रतिवेदन अघि सारेको छ। आसन्न निर्वाचन मुखमै रहेका बेला माओवादी विभाजनतर्फ उन्मुख बनेको हो।
यसअघि सम्भावित सहकार्य र समीकरणका लागि प्रचण्डसँग संवाद गरिरहेका अन्य कम्युनिष्ट घटकपनि प्रचण्डसँग टाढिएका मात्रै छैनन्, नारायणकाजीलाई आफ्नै मोर्चामा सामेल बनाउन माओवादी फुटाउने तयारीमा छन्। फलतः नारायणकाजीलाई फकाउने र विप्लवहरुसँग डराउने तहमा प्रचण्डपुगेका छन्।